imitha yamandla esebenzayo, imitha ye-Industrial, i-Transformer edibeneyo - iHolley
Soloko UfumanaEyona nto ingcono
Fumana ulwazi oluninzi ngathiGO
I-Holley Technology Ltd. yasekwa ngo-1970. Yinkampani yoshishino engundoqo phantsi kweQela le-Holley elizinikele kwi-intanethi yamandla ye-Intanethi ye-Industries Industry.Lumanyano lwamashishini ehlabathi jikelele kunye neentengiso, uphando kunye nophuhliso, ukwenziwa ngobukrelekrele kwimitha yombane, imitha yombane kunye nolawulo lwamandla ngobuchule.
IHolley yenye yeyona mitha yombane inkulu eyenziwa eTshayina enokhuphiswano oluphezulu lwamazwe ngamazwe oluthumela kumazwe angaphezu kwama-60 ehlabathini.
ukwazi ngakumbi malunga nenkampani
Jonga eyethuIimveliso eziphambili
Singumenzi wemitha yombane yobungcali kunye nomthengisi.
I-DIN kaloliwe eSigaba esiSinye sokwahlula i-Eneji ye-Prepayment ye-Eneji ngocingo olusezantsi
Imitha yeSigaba esinye soMbane woMbane
ISigaba seSithathu seSmart seMeta yeKhadi lokuQalwa kwangaphambili
Imitha yesiGaba esiThathu seSitshixo se-Smart Prepayment
ISigaba esiSinye semitha yokuLawula ukuphazamisa
ISigaba seSithathu soMbane esiSmart Meter
IsiGaba esiSinye se-Smart Prepaypad Meter
Isiseko esitsha sokwenza izinto ezikrelekrele, ezizenzekelayo kunye ne-eco-friendly ezihlangabezana nomgangatho we-Industry 4.0.
Inokunyusa ukusebenza kakuhle, ukuphucula ukhuseleko, ukunciphisa ixesha lokuvelisa kunye nokuququzelela ukuveliswa kwemveliso ngokukhawuleza.
Ezi fektri zamkela izixhobo zokuvelisa ezikumgangatho ophezulu ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zemveliso.Asikwazi ukuvelisa imitha yamandla kuphela, kodwa kunye nemitha yegesi, i-transformer kunye nebhokisi yeemitha, njl.
Ngeenzuzo eziziswa kwimveliso yasekhaya, iifektri zethu zaphesheya zinokubonelela ngeemveliso ezingcono kunye nenkonzo kwiqabane lethu lentsebenziswano.
Sizabalazela ukuphumelela okona kuPhakamileyo
IHolley yasekwa ngo-1970 kwaye ihlala igcina indawo yayo njengomnye wababoneleli beemitha ezinkulu eTshayina.
Thumela kumazwe angaphandle
UHolley uthengisela amazwe angaphezu kwama-60 ngokhuphiswano oluphezulu lwamazwe ngamazwe.
IHolley lishishini letekhnoloji ephezulu nelitsha elineepropathi zobukrelekrele ezingaphezu kwama-728.
UHolley uthengise ngaphezulu kwe-13.4 yezigidi zeemitha zombane ngo-2020.
IProjekthi yeemitha zeSaudi Arabia
Iprojekthi ye-Smart Meter yaseMalaysia
Abathengi bethuZezona Iireferensi Zethu Ezibalaseleyo
Ukusukela ekusekweni kweHolley, inkampani yethu ibiphuhlisa iimveliso zethu zokulinganisa ngemitha ngomgaqo womgangatho kuqala.Iimveliso zethu ziye zafumana igama elihle kakhulu kwishishini kunye nokuthembeka okuhle phakathi kwabathengi abatsha nabadala.
ngu adminMatshi 2021
Unozakuzaku weRiphabhlikhi yaseUzbekistan kwiRiphabhlikhi yaBantu baseTshayina undwendwela iHolley
Izolo, u-SAIDOV-uNozakuzaku weRiphabhlikhi yase-Uzbekistan ekwiRiphabhlikhi yaBantu baseTshayina undwendwele iHolley.
ngu adminNgoJuni 2021
UHolley Uphumelele iProjekthi yokuThenga iMmitha yoMbane yeSGCC njengeBhaso lesi-3
Kutshanje siye safumana iindaba ezimnandi zokuba uHolley uphumelele iprojekthi yeSGCC “I-First Electricity Meter Bidding of State Grid Corporation of China ngo-2021”
ngu adminEyoMnga ngo-2019
UHolley uyile kwiVeki yosetyenziso lwaseAsia